morongo casino sy ny fialan-tsasatra suites
morongo casino izy ireo misokatra
vaovao slots am-mohegan sun
vaovao slots am-pala casino
Ankoatra azy ireo dia ho Romanina Quaedvlieg, teo aloha Aostraliana Sisintany Hery kaomisera izay voaroaka avy ny toerana tamin'ny taon-dasa ho an'ny kolikoly misy ifandraisany amin'ny Satro-boninahitra fanadihadiana morongo casino mitam-piadiana ny mpitandro ny asa.
Kanefa ny mpanara-maso, ny Aostraliana Misahana ny Fampiharana ny Lalàna tsy Mivadika (ACLEI), dia mijery na iza na iza amin'ny DHA na Aostraliana Sisintany Hery miray tsikombakomba amin'ny Satro-boninahitra Resorts ny fifadian-kanina-manara-maso ny mpanao heloka bevava ao amin'ny firenena. Mandritra izany fotoana izany, Satro-boninahitra Resorts nilaza ny tatitra tamin'ny fampahalalam-baovao dia "sensationalized" sy ny "mpamitaka," ary dia nilaza ny fakàna ny hevitry ny vahoaka dia ho fahafahana manolotra ny fomba fijery. Satro-boninahitra dia manamarika fa junket ny mpandraharaha tsy miankina amin'ny antoko fahatelo izay hiatrika ny casino orinasa manerana izao tontolo izao, tsy Satro-boninahitra fananana.
Zhou efa voampanga noho ny manampahefana Shinoa amin'ny orinasa lehibe hosoka, ary voalaza ao an-trano ny tranga ao Shina amin'ny maha-fananana ampiasaina an-keriny sy ny herisetra atao amin'ny mpandraharaha mpiara-miasa morongo casino sy ny fialan-tsasatra suites. Ny minisiteran'ny Atitany (DHA) dia nilaza fa nisy ny fifanarahana miaraka amin'ny Satro-boninahitra mba "hanamorana haingana visa fohy-hijanona visa," araka izany dia maro ireo orinasa izay dia mpandray anjara lehibe amin'ny Australian toe-karena. Quaedvlieg efa voalaza ao ny tafa sy dinika amin'ny Australian haino aman-jery fa izy no nanao fandresen-dahatra tamin'ny zokiny mpanao lalàna ny "mitovy tantana" fiarovana ny sisintany dingana ho Satro-boninahitra ny VIP mpilalao, mba hahafahan'izy ireo "tany amin'ny fiaramanidina manokana amin'ny Melbourne seranam-piaramanidina, handray ny zara vola clearances, nataony tao ny fiara, ny hahazo azy ho any amin'ny casino ary mandany vola." Ny Taona, Ny Sydney Morning Herald ary ny Sivy ao amin'ny tambajotra 60 Minitra fandaharana efa voampanga ho Satro-boninahitra Resorts manana maditra ity ny fifandraisana amin'ny fitambaran'andriamanitra telo-mpikambana junket mpandraharaha, ary ny spiriting Shinoa mpanao heloka bevava ao amin'ny firenena amin'ny alalan'ny visa loopholes morongo casino izy ireo misokatra. Izany ihany koa ny mandinika ny fomba Sisintany Hery ofisialy Andrew Anao tonga ho moonlighting toy ny mpiambina ny mpanan-karena junket mpandraharaha antsoina hoe Tom Zhou – fantatra amin'ny anarana hoe "Andriamatoa Chinatown" — izay niasa tao amin'ny Satro-boninahitra Resorts ary dia naniry ny Interpol ho an'ny lehibe sy ny heloka bevava ny fitondran-tena vaovao slots am-mohegan sun.
Iray toy izany ny avo roller mety efa Indoneziana mpandraharaha Joseph Wong Kiia Tai, izay ny Firenena Mikambana dia voampanga ho mifandray fitaovam-piadiana teo aloha Liberiana didy jadona Charles Taylor. Araka ny antontan-taratasy ny hita avy amin'ny Australian Broadcasting Corporation (ABC), Kiia Tai dia avela ho very mihoatra Ny$6 tapitrisa ($4.1 tapitrisa) tao amin'ny Satro-boninahitra ny Melbourne sy Perth fananana, na dia eo aza ny hoe ny foto-kevitry ny firenena MIKAMBANA sazy tamin'izany fotoana izany, izay nahitana ny fandraràna vaovao slots am-pala casino.